1. Iidda farxadda waxay ku dhowdahay dhammaadka sanadka. Dad badan ayaa diyaariya hadiyadaha sanadka cusub. Haddii aad adigu sameysid Ama iibso hadiyado aad siiso kuwa aad jeceshahay Hooyooyin badanna waxay u badan tahay inay u diyaargaroobayaan hadiyado carruurtooda inay kaga qayb galaan madaddaalada saaxiibadood dugsiga. Hadiyad ahaan ama qurxin geeska kirismaska ee xiisaha leh ee aan isku qasaneyn Waxay sidoo kale siinaysaa dareen aad u qanciya kan wax bixiya iyo kan wax qaata labadaba.
2. Qalabka Sida loo duubo sanduuq laba jibbaaran
3. - Hadiyad duub Ku xulo qaab aan jecel nahay ama u dhigma qaabka uu qofku wax u bixinayo. Dadka waaweyn, u dooro midabyo fudud, carruurta, iyagu waa qaabab kartoon ah. Ama qaabab qurux badan oo qurux badan - qaansooyin ama xargaha, ku xulo qaab u dhigma midabka warqadda. Waxay noqon kartaa midab isku mid ah ama midab la jaray, dadka qaarkiis waxay isticmaalaan ubaxyo la qalajiyey, ubaxyo cusub, ama si fudud oo aad kaligaa sameysid, waa iska fudud tahay si kale. Waa la isticmaali karaa Laakiin haddii loogu talagalay martida qaangaarka ah ama madaxa, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la doorto sanduuq midabkiisu fudud yahay, iyadoo loo eegayo waqtiga iyo ku habboonaanta.
4. Siyaabo fudud oo lagu duubo laba jibbaaran ama sanduuqa hadiyadda
5. - Ku rid sanduuqa hadiyadda warqadda duuban ee la jaray. Oo waxaad dhigtaa geesaha santuuqa labada dhinacba, oo loo kala jaanqaadi karo dhinacyada ½ sanduuqa la isticmaalay iyo ¼ sare ee sanduuqa sida ku cad sawirka hore, oo ay tahay inuu gooyo geesaha isku cabirka ah. Nadaafad iyo qurux Iyadoo loo eegayo cabirka sanduuqa aan dooranay - Qaado warqadda si aad ugu daboosho badhanka sanduuqa. Kadib ku dheji xabagta ama cajalad laba-geesood ah - Keen dhinaca kale ee warqadda isku laaban oo xabagta. Ama xabag laba geesood ah - mar labaad ku dheji adkeysi iyo hubaal Dabcan yaanay dhicin - - Dusha sare ee sanduuqa. Riix bartanka si aad ugu haboonaato geesaha. Oo laab laab si aad u qurux badanto - ka dibna u mari sida sawirka ku yaal Ku dheji cajaladda hufan - ku xir xargaha sida sawir. Ama qaarkiin waxaa laga yaabaa inaysan u xirneyn waxay kuxirantahay dookhaaga iyo hal abuurkaaga - Ku xir qaanso ubax qalalan ama ubax cusub sida kuxiran dookhaaga shaqsi.
6. Qurxinta sanduuqa quruxda badani waxay ku dartaa midab iyo farxad qoyska.
7. Xilliga ciidaha Khaanadaha waxaa lagu duubi karaa cabirro iyo midabbo kala duwan waxaana lagu ridi karaa geedka hoostiisa. Ama dhawr hadiyado geli sanduuqa gudihiisa si ay carruurtu ugu raaxaystaan furitaanka hadiyadda ay heleen. Qiyaas inaad haysato Santa Claus. Hadiyado keen Baashaal badan Iyo u samaynta caruusado loogu talagalay guriga iyo qoyska qaab kale Taasi adiga ayaa ku qaban kara qaab aad u fudud, oo lagu daray sanduuq qalbi ku duuban Lagu sameeyay jacayl Qaataha wuxuu la kulmi doonaa daryeel iyo niyad wanaag. Iyo waliba abuurid aan xadidnayn sidoo kale Intaa ka dib, aan u diyaar garowno samaynta sanduuq hadiyad sidayada oo kale ah !!